यू१९ एसिया कप : नेपाललाई बदला लिने अवसर! | Hamro Khelkud
यू१९ एसिया कप : नेपाललाई बदला लिने अवसर!
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – श्रीलंकामा जारी एसीसी यू१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल यूएईसँग खेल्दै छ । खेल नेपाली समय अनुसार विहान ९:४५ पछि सुरु हुने छ ।
नेपालर युएई लगातार दुबै खेलमा पराजित हुँदै समुह बी बाट बाहिरिसकेका छन् । त्यसैले दुबै टोलीका लागि यो खेल प्रतिष्ठाको लडाईमात्र हुने छ । नेपाल श्रीलंकासँग ५ र बंगलादेशसँग ६ विकेटले पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो । यूएई श्रीलंकासँग ५२ रन र बंगलादेशसँग ६ विकेटले पराजित भयो ।
वैशाखमा सम्पन्न यू१९ विश्वकप छनोटमा नेपाल यूएईसँग डक वर्थ लेविस पद्धतीका आधारमा १ रनले पराजित हुँदै आगमी वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुने यू१९ विश्वकप खेल्न पाएन । जुन पिडाको बदला नेपालले यूएईसँग लिन चाहान्छ ।
नेपाली टोलीमा आज तीन खेलाडी परिवर्तन हुन सक्ने संभावना रहन्छ । नेपाल समुह चरणबाट बाहिरि सकेको हुँदा सुरुवाती दुबै खेलमा बेन्चमा बसेका प्रतिस जिसी,खडक बोहरा र लोकेश बमलाई प्रशिक्षक विनोद दासले मौका दिन सक्छन् । भिम सार्की,आशिफ शेख र हरि बहादुर चौहानलाई विश्राम दिन सक्ने संभावना छ ।
बंगलादेशविरुद्ध ८१ रन प्रहार गरेका पवन सरार्फ र आक्रमक ५६ रन जोडेका सन्दीप जोरा आजको खेलमा नायक बन्न सक्छन् । राम्रो लयमा रहेका ओपनर रित गौतम र कुशल मल्लबाट पनि उत्कृष्ट प्रर्दशनको अपेक्षा गरिएको छ ।
कप्तान रोहित कुमार पौडेल र आशिफ शेखको खराब प्रर्दशन नेपाललाई चिन्ताको विषय हो । नेपालले दुबै खेलमा बलिङमा कमजोर प्रर्दशन गरेको छ । स्पिनर सागर ढकालले अपेक्षाकृत प्रर्दशन गर्न सकेनन् । श्रीलंकासँग १ विकेट लिएका उनी बंगलादेशविरुद्ध विकेटविहीन बने । राशिद खान र कमल सिंह ऐरीले पनि आशा गरे अनुसार विकेट लिन सकेका छैनन् । जुन नेपाललाई चिन्ताको विषय हो ।